Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny ReactOS 0.4.9 miaraka amina endrika vaovao sy fanatsarana vaovao | Avy amin'ny Linux
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny ReactOS 0.4.9 miaraka amina endrika vaovao sy fanatsarana
Ny ekipa fampandrosoana ho an'ny ReactOS, ny rafitra miasa loharano misokatra izay mifanaraka amin'ny programa Windows sy mpamily, nanambara ny famoahana ny ReactOS 0.4.9.
ReactOS 0.4.9 dia tonga mihoatra ny herinandro lasa izay, saingy tsy nisy resaka momba ny vaovaon'ilay kinova mandraka androany, rehefa namoaka famerenana feno ny ekipan'ny fampandrosoana miaraka amin'ny antsipiriany, pikantsary ary koa ny lahatsarin'ity kinova vaovao ity.
Ny endrika mahaliana indrindra an'ny ReactOS 0.4.9 dia ny fahaiza-mampiantrano tena, izay mamela ny mpampiasa hampiasa kinova ReactOS eo ambonin'ny fametrahana ReactOS. Talohan'izay dia efa afaka nampiantrano tena ny ReactOS, saingy nanana olana maro ilay fiasa ary nesorina tao anaty kernel farany teo.
Ho fanampin'ny fahaizan'ny mampiantrano tena, ReactOS 0.4.9 dia mitondra fanatsarana maro amin'ny fitantanana Shell sy fitadidiana, mahatonga ny rafitra azo itokisana sy milamina kokoa. Ny iray amin'ireo fanatsarana ireo dia ny fahaizana mametraka rindranasa lehibe amin'ny fari-tsarimihetsika ambany.
Ohatra, ianao dia ho afaka hilalao lalao isan-karazany izay tsy ao amin'ny Linux zanatany, ao anatin'izany no ananantsika Warcraft III: Fanjakan'ny korontana, kankana averina, StarCraft I ary Windows Pong. Azonao atao mihitsy aza ny mihazakazaka Mac OS X 10.4 ao anatin'ny ReactOS mampiasa emulator PearPC.
Mikasika ny fanatsarana ny Shell, ReactOS 0.4.9 dia manampy ny fanitarana Zip Shell izay mamela ny mpampiasa hamoaka rakitra .zip raha tsy mila mpitantana rakitra ivelany. Ho fanampin'izay, azo atao izao ny maka tahaka ny fisie sy ny lahatahiry amin'ny fisintomana azy ireo amin'ny bokotra havanana totozy, mamorona rakitra misy fanitarana samihafa ary mampifangaro azy ireo amin'ireo programa ary mampihemotra ny baikon'ny famonoana.
Farany, ReactOS 0.4.9 dia afaka maneho azy ho Windows 8.1 amin'ny API samihafa. Etsy ankilany, ny asa dia manohy mampihatra ny fanohanana amin'ny booty amin'ny fitaovana USB, izay ho tonga amin'ny famoahana ReactOS ho avy.
Azonao atao ny misintona ny ReactOS 0.4.9 amin'ny anao pejy ofisialy, tsy misy lesoka lehibe ka azonao ampiasaina ho toy ny fizarana isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny ReactOS 0.4.9 miaraka amina endrika vaovao sy fanatsarana
spacheco dia hoy izy:
Ary rafitra miasa inona no ifotoran'izany?
Mamaly amin'ny spacheco
fat9105 dia hoy izy:
Lazaiko aminao fa avy amin'ny Rosiana izy io, mifototra amin'ny Windows NT, loharano malalaka sy malalaka izy io, ka novakiako fa nosoratana hatramin'ny voalohany ny rafitra, saingy tsy rafitra mifototra amin'ny Linux izany ary tsy mizara UNIX ihany koa. maritrano; satria mivoaka amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny Linux, tsy haiko.
Mamaly an'i gordo9105
sysadmin dia hoy izy:
Araka ny fantatra dia karazana linux ity izay mampiasa ny tetikasa divay mba hifanaraka amin'ny rafitra microsoft
Mamaly an'i sysadmin
Quadrapassel: lalao Linux amin'ny fomban'ny Tetris mahazatra